बंगलादेशमा एमबीबीएस पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ ? पैसा र करियर जोगाउने यो हो सहि तरिका, अन्तिम मिति डिसेम्बर १० !
ARCHIVE, MUDRA MAMILA, SPECIAL » बंगलादेशमा एमबीबीएस पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ ? पैसा र करियर जोगाउने यो हो सहि तरिका, अन्तिम मिति डिसेम्बर १० !
काठमाडौँ- बच्चैदेखि कसैलाई 'तिमी के बन्छौं ?' भनेर कसैले सोध्यो भने बच्चाको सहज उत्तर हुन्छ, 'डाक्टर बन्छु ।' यसो त अभिभावकको चाहाना पनि आफ्नो छोरा वा छोरी डाक्टर- इन्जिनियर बनोस् भन्ने पक्कै हुन्छ । सामाजिक रुपमा प्रतिष्ठा हुने भएकाले पनि यो पेशा प्रति धेरैको रुची बढेको हो । तर महँगो शुल्कका कारण धेरै विद्यार्थी एमबीबीएस पढ्नबाट बन्चित छन् । नेपालमा एमबीबीएस पढ्न नसकेका वा चाहाना नभएका दुवैखाले विद्यार्थीले तेश्रो मुलुकलाइ छान्ने गरेका छन् । जसमा बंगलादेश विद्यार्थीको पहिलो रोजाईमा आउने गरेको छ । तर पछिल्लो समय बंगलादेशका केहि कलेजहरु 'ब्याल्क लिष्ट'मा परेको खबर विद्यार्थी र अभिभावक तर्सिएका छन् । तर दलालको भरमा बंगलादेश जाने र कमसल कलेज छान्दा त्यसो हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
ब्ल्याक लिष्ट कलेजहरुको यथार्थ के हो ?
नेपालबाट गएका कतिपय विद्यार्थीहरु ब्ल्याक लिष्ट भएका कलेजमा पढिरहेकाले कतिपय नेपाली विद्यार्थी पनि यसको पीडीत बनेका छन् । एजेन्टले कमिसनको लोभमा सस्ता कलेजमा भर्ना गरिदिनाले विद्यार्थीहरु मर्कामा परेका हुन् । काठमाडौँमा यस्ता कन्सल्टेन्सीहरु पनि छन्, जहाँका मालिकले बंगलादेश देखेका समेत छैन । पैसा कमाउने उदेश्यले उनीहरुले कमसल कलेजहरुमा विद्यार्थीहरुलाई भर्ना गरिदिका कारण विद्यार्थीहरु पीडीत बनेका हुन् । कतिपय समाचारमा बंगलादेशनै जान रोक भन्ने किसिमा अफवा हरुपनि आए । वास्तवमा बंगलादेश जान नेपाली विद्यार्थीहरुलाई रोक लगाइएको होइन । बरु ब्ल्याक लिष्टमा परेका कलेजहरुमा जानचाहिं रोक लगाएइएको हो ।
पछिल्लो समय बंगलादेशका केहि कलेजहरु 'ब्याल्क लिष्ट'मा परेको खबर विद्यार्थी र अभिभावक तर्सिएका छन् । तर दलालको भरमा बंगलादेश जाने र कमसल कलेज छान्दा त्यसो हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
बंगलादेशमा एमबीबीएस पढ्न के गर्नुपर्छ?
बंगलादेशमा एमबीबीएस पढ्न निश्चित मापदण्डहरु पूरा गर्नुपर्छ । कक्षा ११ र कक्षा १२ मा बायोलोजी विषयमा विद्यार्थीले ६० % भन्दा बढी अंक ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि विद्यार्थीले टियु अन्तर्गतको आइओएम, वा काठमाडौँ विश्वविद्यालय, वा पाटन वा धरानमध्ये कुनै प्रवेश परिक्षामा कम्तीमा ५० प्रतिशत अंक ल्याएको हुनुपर्छ । त्यसपछि विद्यार्थीले कलेज छान्ने हो । यहि नेर विद्यार्थी सजग हुन आवश्यक छ । सस्तो कलेज हत्तपत्त छान्नु हुँदैन । आफ्नो अस्पताल नभएका यस्तै कलेजहरु ब्ल्याक लिष्टमा पर्ने हुन् । आफुले छानेको एजेन्ट सहि हो कि होइन भनेर हेर्नुपर्छ । त्यसपछि एनइबी, एमओइ र फरेन अफेयर्स मन्त्रालयमा आफ्नो मार्कशीट एटेष्ट गरौनुपर्छ । त्यसपछि इक्युभ्यालेन्सी फर्म पनि भर्नुपर्छ । त्यसपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको योग्यता प्रमाणपत्र लिएर शिक्षा मन्त्रालयबाट 'नो अब्जेक्सन लेटर' लिनुपर्छ । त्यसपछि भिजा प्रोसेसीङको काम अगाडी बढाउन मिल्छ ।
कक्षा ११ र कक्षा १२ मा बायोलोजी विषयमा विद्यार्थीले ६० % भन्दा बढी अंक ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि विद्यार्थीले टियु अन्तर्गतको आइओएम, वा काठमाडौँ विश्वविद्यालय, वा पाटन वा धरानमध्ये कुनै प्रवेश परिक्षामा कम्तीमा ५० प्रतिशत अंक ल्याएको हुनुपर्छ । त्यसपछि विद्यार्थीले कलेज छान्ने हो ।
अधिकांस कन्सल्टेन्सीका मालिक नै बोल्न मान्दैनन्, हतार भइसक्यो है !
नेपालका विद्यार्थी बंगलादेशमा पढाउनका लागि नेपालकै सबैभन्दा विश्वाशीलो संस्था कुन हो भन्ने विषयमा हामीले खोजीनिती गर्यौं । तर दलाली गर्ने बसेका भएर होला अधिकांस कन्सल्टेन्सीहरु हामीसंग बोल्ने मानेनन् । यसैबीच हाम्रो सम्पर्कमा आयो, 'मेयर एजुकेसन कन्सल्टेन्सी ।' संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक राजु ढकालले भने हामीलाई सबै कुरा एक एक गरी बुझाए । उनले केहि गलत गर्ने कन्सल्टेन्सीका कारण काम नै गर्न भनेर बसेका आफुजस्तालाई मार्का परेको समेत सुनाए । पुतलीसडक स्थिति मेयर एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका प्रबन्ध निर्देशक राजु ढकालका अनुसार डिसेम्बर १० गते सम्म आवेदन दिने विद्यार्थीहरुले मात्र राम्रो कलेजमा भर्ना पाउँछन् । जनवरी पहिलो हप्ताबाट बंगलादेशका कलेजहरुमा पढाइ नै सुरु हुनु हुनाले पनि यस्तो हतार गर्नुपरेको हो ।
डीसेम्बर १० पछी आवेदन दिन खोज्नेहरुलाई भिजा आउने सम्भावना पनि निकै कम हुन्छ भने राम्रो कलेज पनि पाईदैन ।
उनका अनुसार डिसेम्बर १० पछी आवेदन दिन खोज्नेहरुलाई भिजा पाउने सम्भावना पनि निकै कम हुन्छ भने राम्रो कलेज पनि पाईदैन ।' समयमै सचेत बनेर आफ्नो भविष्य र पैसाको ख्याल गर्दा नै राम्रो हुन्छ । हामी कुन कलेजको आधिकारिक हौँ भन्ने प्रमाणपत्रनै हामीसंग छ । हामी हामीले बंगलादेश पठाएका विद्यार्थीहरुको ग्यारेन्टी लिन्छौं ।' उनले भने ।